प्रोटीन खेल पोषण को आगमन संग महत्त्व पाउनु भएको छ। त्यो प्रोटिन एक खेलाडी को आहार मा एक आवश्यक तत्व हो। यो उच्च प्रोटिन सामग्री (70-95%) संग एक विशेष उत्पादन हो र प्रोटिन मांसपेशिहरु निर्माणको मुख्य तत्व हुन चिनिएको छ। शरीर मा भएपछि, प्रोटिन सीधा गठन र मांसपेशी कक्षहरू भाग कि एसिड एमिनो गर्न cleaved छ। यसरी, मांसपेशी वृद्धि खपत प्रोटिनको मात्रा मा निर्भर गर्दछ। तर, त्यहाँ यति धेरै फरक छन् प्रोटीन को प्रकार। त्यसैले जो प्रोटिन सबै भन्दा राम्रो छ?
सजिलै digestible ( "छिटो") प्रोटिन - मट्ठा प्रोटीन छ। यो प्रोटिन कुनै पनि समय मा लिइएको गर्न सकिन्छ - पहिले र बिहान वा दिउँसो एक कसरत पछि। "छुट्टयाउनुहोस्" प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेट को एक ठूलो रकम संग पूरक - - त्यहाँ शुद्ध प्रोटिन छ "। वजन gainer"
ढिलो वा छांछ प्रोटिन - यो प्रोटीन छेना। यो प्रोटिन किनभने छांछ प्रोटिन, पेट मा प्राप्त मा "परिवर्तन", एक रात वा समय को ठूलो अवधि मा भोजन को बीच लिन आवश्यक छ "जेल।" यो यसको cleavage र थप पाचन लागि "छिटो" प्रोटिन भन्दा एकदम बढी समय आवश्यक हो।
Gainer यसलाई लायक छ?
शब्द "gainer" जो पाउन वा वृद्धि गर्न अर्थ, पाउनको लागि अंग्रेजी क्रिया बाट लिइएको हो। Gainer - थपियो जो legkousvaevaemy प्रोटिन (दूध वा अन्डा), छ छिटो कार्बोहाइड्रेट, यस्तो चीनी वा फ्रैक्टोज रूपमा। केही अवस्थामा, थप र creatine छन्। creatine को भूमिका दृश्य मांसपेशीमा वृद्धि छ।
प्रशिक्षण पछि र मांसपेशी तन्तु मा प्रोटिन संश्लेषण को प्रवेग मा मांसपेशी ऊर्जा replenishing यो उत्पादन को कार्य। तर, यो राहत मा काम गर्ने वजन gainer खेलाडीहरूलाई लिन वा वजन सिफारिस गरिएको छैन। यो धेरै पौष्टिक किनभने Gainer, मात्र मांसपेशी तन्तु, तर पनि बोसो बढ्छ।
प्राप्त प्रोटिन Norms
छन् खेल संलग्न छैन जो मान्छे को लागि, प्रोटिन खपत दर प्रति दिन शरीरको वजन को 1 किलो 1.5 ग्राम बराबर छ, र खेलाडीहरूलाई लागि, यो नियम थप - प्रति 1 किलो 2-2.5 ग्राम। उदाहरणका लागि, एक व्यक्ति मांसपेशी वृद्धि गर्न खोज्ने र यदि यसको वजन 75 किलो पर्छ त्यसपछि प्रति दिन प्रोटिनको 150-200 ग्राम छ।
मासु 100 ग्राम प्रोटिन को बारेमा 20-25 ग्राम समावेश गर्दछ र प्रोटिनको 80g बारेमा एक व्यक्ति खाना एक दिनमा खपत। यसरी, यो प्रोटिन मिश्रण भर्न आवश्यक छ 70-120 जी, अभाव।
भर्ना नियम प्रोटिन
प्रोटीन सजिलै आफूलाई तयार गर्न सक्ने एक ककटेल लिन। सामान्यतया, तिनीहरूले प्रोटिन, दूध वा पानी र यस्तो फल अन्य सामाग्री, समावेश। एक ब्लेंडर को मद्दत यी सबै घटक सम्म चिल्लो मार छन्। यो सबै लक्ष्य भिन्न किनभने, सबै भन्दा राम्रो कुन प्रोटिन भन्न गाह्रो छ। एक व्यक्ति राहत मा काम गरिरहेको छ भने, त्यसपछि यसलाई आवश्यक एक कसरत पछि शुद्ध प्रोटिन लिन छ। यदि ठूलो, वजन gainer। शुद्ध प्रोटिन व्यायाम अघि र दिन भर बिहान लिएको हुनुपर्छ। छेना प्रोटिन ढिलो वा लिन रातको लागि आवश्यक छ। एक समयमा मानव शरीर प्रोटिनको 40 ग्राम अवशोषित गर्न सक्षम छ, त्यसैले यो स्वागत प्रोटिन विभाजन गर्न आवश्यक भएकोले - 1 वा2scoops दिन को समयमा र खानाको समयमा लिएको 1 चम्चा छन्।
प्रोटिनको चयनको लागि मापदण्ड
प्रोटिन संरचना - विकल्प र एक राम्रो प्रोटिन पाउन बाटो मा सबै भन्दा वफादार सहायक। विभिन्न प्रोटिन मिश्रण 40 85 मा% शुद्ध प्रोटिन देखि शामिल, र अक्सर एक व्यक्ति एक पारंपरिक चीनी किन्छ। कम मूल्य चयन मा मुख्य मापदण्ड हुँदैन।
यो प्रोटिनको प्रकारको राम्रो छ के तपाईं निर्णय गर्नु अघि लेबल मा संकेत संरचना र प्रयोगको विधि अध्ययन गर्न आवश्यक छ। 30 प्रोटिनको 24 G समावेश G को एक राम्रो गुणवत्ता प्रोटिन भाग।
कारण उच्च प्रोटिन सामग्री मांसपेशी विकास को लागि प्रोटीन आफ्नो विकास को आधार हो। कठिन प्रोटीन को प्रयोग बिना प्रशिक्षण मा महत्वपूर्ण परिणाम हासिल गर्न। प्रोटिन ठीक लग्नु गर्नुपर्छ। तपाईं लागि सबै भन्दा राम्रो र सही छ जो प्रोटिन ठीक थाहा, आफ्नो चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्।
मूत्रमा हेमोग्लोबिन: यसको अर्थ के हो? विकारको कारणहरू, चिन्हहरू र अभिव्यक्तिहरू
Valerian tincture, motherwort, नागफनी, peony एक मिश्रण: समीक्षा, प्रयोगको लागि निर्देशन
क्यूफिशिस कहाँ र कसरी गर्ने? क्रेफिशको प्रवर्द्धन कसरी फाइदाजनक छ?